Salmon ine asparagus mumuto, yakapusa, yakapfuma uye yakapfava dhishi. | Kicheni Mapepa
Salmon ine asparagus mumuto
Montse Morote | 22/04/2021 09:00 | Hove Mapoka
Salmon ine asparagus mumuto. Hove inonaka, dhishi rakareruka uye rakareruka kugadzirira.
Sezvamunoziva salmoni hove yakanakisa, ine hutano hwakanyanya, yakafuma mumapuroteni uye omega 3 uye omega 6 mafuta acids uye mamwe akawanda mabhenefiti.. Kushandiswa kwaro kunokurudzirwa kune wese munhu.
Kuperekedza dhishi iri, miriwo iri kufamba mushe, unogona kuiperekedza nemuriwo waunoda asi ini ndauperekedza neimwe asiparagasi.
Asparagus ine akawanda mabhenefiti uye zvivakwaIwo akareruka uye anoenda mushe kwazvo kuperekedza iyi salmon dhishi iyo inosangana zvakanaka neasparagus.
Chikafu chinoshamisa, chakanakira mhemberero dzakadai sekudya kwemanheru kana masikati, nemuto inonaka chaizvo
Recipe mhando: Hove
Nguva yakazara: 35 M
1-2 steaks pamunhu
1 boka re asparagus
2 gariki clove
150 ml. waini chena
100 ml. hove muto kana mvura
Oiri uye munyu
Kugadzirira iyi salmon dhishi ine asparagus mumuto, chinhu chekutanga kuita kuchenesa asiparagasi, isu tichacheka chikamu pakupedzisira, chakaomesesa. Isu tinoisa yakafara pani yekutsvaira, isu tichaisa yakanaka jet yemafuta, isu tinosvina uye kusviba iyo asparagus zvishoma.
Kana iyo asparagus inotanga kuita brown, wedzera iyo minced garlic.
Tinomhanyisa zvakanaka uye tinowedzera chipunu cheupfu. Tinomutsa kuitira kuti furawa isunungurwe.
Ipapo isu tinowedzera waini, rega doro ridzikise kwemaminetsi mashoma.
Apo waini inoderera, wedzera muto kana mvura.
Isu tinogadzirira hove, mwaka nemunyu uye mhiripiri. Ini ndashandisa block imwechete pamunhu, kana tikazviita vatete kwazvo, zvidimbu zvesalmoni zvinotsemuka.
Isu tinowedzera zvidimbu zvesalmoni mupani kana casserole kwatinowana asparagus. Vhara iyo casserole uye bika kwemaminitsi gumi kana kusvika zvaunoda.
Mushure menguva ino isu tinoravira munyu, gadzirisa uye takagadzirira kushandira !!!
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Hove Mapoka » Salmon ine asparagus mumuto